ပြည့်တန်ဆာနှင့် ပျော်ပါးသူများ အရေးမယူသည့် ဥပဒေ ပြင်မည်မဟုတ် | ဧရာဝတီ
ပြည့်တန်ဆာနှင့် ပျော်ပါးသူများ အရေးမယူသည့် ဥပဒေ ပြင်မည်မဟုတ်
သာလွန်ဇောင်းထက်| January 25, 2013 | Hits:25,068
| | ရန်ကုန်မြို့မှ ညဉ့်ငှက်ကလေးများ (ဓာတ်ပုံ – Felix Features)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၄၉ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သော ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်မည်မဟုတ်ဘဲ ယင်းဥပဒေအရ ပြည့်တန်ဆာနှင့် ပျော်ပါးသူ အမျိုးသားများကိုလည်း တရားခံများအဖြစ် သတ်မှတ် တရားစွဲဆို အရေးယူခွင့် မရှိကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းက ပြောသည်။
ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တာမွေမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေက ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးများနှင့်ပျော်ပါးသူ အမျိုးသားများကိုလည်း အားပေး ကူညီသူများအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး တရားစွဲဆို ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းခဲ့ရာ ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေသည် ပြည့်တန်ဆာမှုများ ပပျောက်ရေးအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေဖြစ်ပြီး ယင်းဥပဒေအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သော အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများကို တန်းတူ အခွင့်အရေး ပေးရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ပြည့်တန်ဆာမှုများသည် မမြင်ကွယ်ရာတွင် ဖြစ်ပွားသော အမှုများဖြစ်သည့်အတွက် သက်သေ အထောက်အထား လက်ပူးလက်ကျပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးရန် အလွန်ခက်ခဲကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အသွင်ယူသူနှင့် ငွေကြေးပေး ကာမ ရယူသော အမျိုးသားများကို သက်သေအဖြစ် အသုံးပြုကာ တရားစွဲဆို တင်ပို့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေအရလည်း ပျော်ပါးသူ အမျိုးသားများက သက်သေအဖြစ် ထွက်ဆိုလျှင် ပြစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုထားကြောင်း ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းက ရှင်းပြသည်။
“ပြည့်တန်ဆာ ပြစ်မှုကို သက်သေထင်ရှား ပြသနိုင်ဖို့ အကြောင်း အားလုံး သိရှိသမျှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ အမျိုးသားများကို ပြစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးများနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ငွေကြေးပေး ကာမရယူတဲ့ အမျိုးသား များကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၊ ၁၁၄ နဲ့ ၁၀၉ တို့အရ အားပေးကူညီသူအဖြစ် တရားစွဲဆို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် နိုင်ခြင်း မရှိပါ” ဟု ရဲချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်းက ဆိုသည်။
သို့ရာတွင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းကို စီးပွားဖြစ် လုပ်ဆောင်သူ၊ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ရန် ဆွဲဆောင်သူများ၊ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ရရှိသည့် စီးပွားကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုသူ၊ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ရန် သွေးဆောင် အနိုင်ကျင့်သူ၊ ပြည့်တန်ဆာအိမ် စီမံကြီးကြပ်သူ၊ စီမံကြီးကြပ်ရာမှာ ကူညီဆောင်ရွက်သူများကို အမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားဖြစ်စေ ဥပဒေအရ အလုပ်ကြမ်းနှင့် တနှစ်အောက်မနည်း၊ သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်စီရင်မည်ဟု သိရှိရသည်။
ပြည့်တန်ဆာပင် ဖြစ်သော်လည်း အမျိုးသားက အလိုမတူဘဲ ကာမဆက်ဆံလျှင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆ မုဒိမ်းမှု မြောက်ပြီး ယင်းအမျိုးသားကို တရားစွဲဆို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းက ရှင်းပြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေကမူ ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးကို အရေးယူပြီး ပျော်ပါးသူ အမျိုးသားကို အရေးမယူခြင်းသည် ကျားမ ခွဲခြားမှုတရပ် ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေး ဥပဒေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို ဖမ်းဆီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာတွင်လည်း အသက် ၁၈ နှစ်အောက် မိန်းကလေးများ ပါဝင်နေပြီး ယင်းအမျိုးသမီးများကို အသက်ပြည့်ပြီးသူများ ကဲ့သို့ အကျဉ်းထောင်များတွင် ပြစ်ဒဏ် ပေးထားသည်ဟု ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေက လွှတ်တော်တွင် တင်ပြ ပြောဆိုသွားသည်။
“ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အဖမ်းခံထားရတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူရဲ့ မိခင်နဲ့ အစ်မက လာရောက် အကူအညီ တောင်းခံလို့ ဒီမေးခွန်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေအရ ၁၈ နှစ်အောက် မိန်းကလေးများ ပါဝင်လျက် ရှိနေကြောင်း သိနေရပါတယ်။ အဆိုပါ အသက်မပြည့်ပြီးသူများ အရေးယူရာမှာ အသက်ပြည့်ပြီး အရွယ်ရောက် သူများသဖွယ် တရားစွဲဆိုပြီး ပြစ်ဒဏ် ကျခံစေလျက် ထောင်ကျခံစေကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီလို အရွယ် မရောက်သေးဘဲ ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်များကို အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ပြန်လည် စိစစ်ပေးစေလိုပါတယ်” ဟု ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေက ပြောသည်။
ရဲချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်းကမူ အကျဉ်းထောင်များတွင် ပြစ်ဒဏ် ကျခံနေရသော အမျိုးသမီးများကို အသက်စိစစ် လက်ခံကြောင်း၊ ပြည့်တန်ဆာမှုဖြင့် အကျဉ်းကျ ခံနေရသော အကျဉ်းသူများကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်း သင်ကြားပေးပြီး ခုခံအား ကျဆင်းမှုရောဂါရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပေးကြောင်း၊ ရောဂါရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တွံတွေးမြို့တွင် ရှိသော အမျိုးသမီးများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး စခန်းများသို့ ပေးပို့ စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေးအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးသူဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရလျှင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် တနှစ်အောက်မနည်း၊ သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ကျခံရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကမူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာများကို ကျန်းမာရေး စိစစ်ပြီး တရားဝင် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခွင့် ပြုသော စနစ်ဖြစ်ထွန်းရေးမှာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရ မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ ဥပဒေအရ တရားဝင် ခွင့်မပြုပေးထားသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ကြီးထွားနေပြီး ကူးစက်ရောဂါများ ပျံ့ပွားစေသော ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးများနှင့် လူမှုရေး ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ထွန်းနေကြောင်း ရှင်းပြသည်။
“ဒီနိုင်ငံမှာ ဥပဒေနဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေ ခွင့်ပြုဖို့က ယဉ်ကျေးမှုအရ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းက ကြီးမားစွာ ရှိနေတာပဲ။
အဲဒါကြောင့် ဖြစ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကလည်း တော်တော်ကို များပါတယ်။ လူတွေကို ကျန်းမာရေး အသိပေး သင်တန်းတွေ၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆက်သွားရမယ် ထင်ပါတယ်” ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေအရ ပြည့်တန်ဆာများကို ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရန် အလွန်ခက်ခဲပြီး ပြည့်တန်ဆာများ ကလည်း ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး သင်တန်းများ တက်ရောက်ရန်ပင် ကြောက်ရွံ့ နေကြကြောင်း၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေမှာ ခေတ်မမီတော့သည့်အတွက် ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း၊ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများတွင်ပင် ပြည့်တန်ဆာများကို ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုလာပြီဟု သိရှိထားကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အနေဖြင့် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များ ကုသစောင့်ရှောက်ပေးနေသော ကိုရာဇာက ပြောသည်။
“ဥပဒေကြောင့် အသိပညာပေးရေး လုပ်ငန်းလုပ်ရတာ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် တုန်းကဆိုရင် World Vision က ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးက ဈေးတခုမှာ ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့အတူ ဖောက်သည်တွေကို ကွန်ဒုံးဝေတယ်။ အဲဒါကို ရဲက အဲဒီ World Vision ဝန်ထမ်းကို ပြည့်တန်ဆာပါဆိုပြီး ဖမ်းပြီး အရေးယူဖို့ လုပ်တော့ ကျနော်တို့ မနည်းလိုက်ရှင်းပေးရတယ်။ ပြောချင်တာက အဲဒီဥပဒေက ခေတ်မမီတော့ဘူး။ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုနေပါပြီ” ဟု ကိုရာဇာက ဆိုသည်။
ဒီရေတော စိုက်ပျိုးရန် ဟောပြောမှုဖြင့် ဒေးဒရဲ ဒေသခံ ၃ ဦး ဖမ်းဆီးခံရနမ့်ခမ်းတွင် ဆီလီကာ မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းရန် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတရုတ် ၀န်ထမ်းများနှင့် ရန်ဖြစ်သော မြန်မာများ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရကန်ကြီးထောင့် အများပိုင်မြေကွက် အတွက် အာဏာပိုင်နှင့် ဒေသခံများ ပြဿနာဖြစ်နေရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းလားမှာ ကြီးထွားနေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း
20 Responses LeaveaReply Cancel reply
ရာဇာ January 25, 2013 - 6:08 pm အဲဒီ ဥပဒေ တခုဘဲ ခေတ်မမှီ တော့တာမဟုတ်ပါဘူး…မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိယနေ့ သုံးနေသော ဥပဒေများ၏ ၈၅% မှာ သူတို့အခေါ် နယ်ချဲ့ကိုလိုနီ ခေတ်ကတဲက ပြဋ္ဌန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေဖြစ်လို့ လက်ရှိ ခေတ်နဲ့ လွန်စွာမှပင် အသုံးမတဲ့တော့ကြောင်း…ယနေ့သတင်းတခုထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတာက ကျောင်းသားကို ရိုက်တဲ့ ဆရာမကို တရားရုံးက ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀/ တစ်ထောင်ကျပ် မပေးဆောင်နိုင်လျှင် ထောင်ဒဏ်တလ ဆိုတော့ တစ်ထောင်ဆိုတဲ့ ငွေ နဲ့ ထောင်ဒဏ်ကို တလ မပြောနဲ့ တနာရီ တောင်မလဲဘူး….ဆိုတော့ကာ ဆရာမက ဒဏ်ငွေ တစ်ထောင်ပေး..ပြီးရင်တော့ နောက်နေ့ အဲဒီကျောင်းသားတော့ သေဘို့သာပြင်ထားတော့..သူ့ကိုတိုင်လို့ ဆိုပြီး ဆရာမ က အသေဆော်မှာ သေချာတယ်…ထက်ထက်မိုးဦး တောင် သတင်းထောက်မလေးကို ပါးရိုက်တာ ဒဏ်ငွေ တစ်ထောင်ဘဲ ပေးရတာနော်….ပြောရင်း လက်တောင်ယားလာပြီ..အိတ်ထဲ ငွေတစ်သောင်းထဲ့ပြီး အမြင်ကပ်တဲ့ သူ ၁၀ ယောက်လောက် လိုက်ရိုက်ချင်စမ်းဘိ….
Reply perspective January 25, 2013 - 6:57 pm I comment for the status of health problems & social problems , I agree the law for the prostitutes to be legal, this will help to solve the transmission of HIV , and other sexual transmitted diseases ,and also make the under-adult young girls to prevent from the sexual offenses,the only thing I want congressmen to know is that no women want to be prostitute , we have to solve the aetiology of the problems not to cover it. save the young poor girl from sexual offense is help them educated not put them into prison. if let the man to buy sex but not allow the woman to sell , IS THAT A LAW?
Reply ဌေးဝင်း January 25, 2013 - 7:06 pm လွှတ်တော်မှာ…တခြားဆွေးနွေးတင်ပြစ၇ာမရှိကြတော့ဘူးလား။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်တယ်ဆိုတာ…ဘာအလုပ်မှ..လုပ်ကိုင်စားသောက်လို့မ၇လို့..အချိန်တိုတိုနဲ့ငွေများများရှာ၇တာပါ……ဘယ်မိန်းခလေးမှ…ပြည့်တန်ဆာမလုပ်ချင်ကြပါဘူး။…..ေ၇ာင်းသူရှိလို့.၀ယ်သူရှိသလို…၀ယ်သူရှိလို့ေ၇ာင်းသူရှိတာပါ….ဒါကိုဈေးကွက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာတွေ..ထမင်းငတ်တော့.တာမွေမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေက…အိမ်ခေါ်ထမင်းကျွေထားမှာလား။ပြည်တန်ဆာမရှိတဲ့..နှိုင်ငံကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါ…ပြည်တန်ဆာအသက်ငယ်လေ..ဈေးကြီးလေဘဲ….
Reply Shwe Hinthar January 27, 2013 - 10:38 am All USDP members are pimps.
Reply ဦးတင် January 25, 2013 - 7:36 pm ဖော်ပြထားသော အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံကို လူမှုေ၇းရှုထောင့်မှကြည့်၍ မျက်နာလေးတော့ ပိတ်ပေးစေချင်ပါသည် ။
Reply myanmarpolice January 25, 2013 - 7:36 pm ပြည်တန်ဆာ အမျိုးသမီးများ အပေါ် ဆက်ကြေးကောက် ငွေညစ် နေသော ရဲ၊ နယ်ထိန်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မြိုနယ်ရဲစခန်း များကို အရေးယူဖမ်းဆီး ပြစ်ဒဏ်ချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မြိုနယ်များ၊ ရပ်ကွက်များတွင် ရဲတပ်ဖွဲဝင်များကိုယ်တိုင် လိုင်းကြေးယူ ဖွင်လစ်ထားသည့် ပြည်တန်ဆာ ရုံများကို ရှိနေပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီး။ ရဲချူပ်ကျော်ကျော်ထွန်း နှင့် ပြည်ထဲရေးဌာန တစ်ခုလုံး တာဝန်လစ်ဟင်းမှု့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းပါဝင် ကြံစည်းမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တန်ဆာ အမျိုးသမီးများကို အရေးယူသလို သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များကိုပါ အရေးယူရန် အထူလိုအပ်ပါတယ်။ ဌာနဆိုင်ရာ ရဲဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင် မသိချင်ဟန်ဆောင်သည်က တစ်မျိုး သိလျှက်နှင့် ငွေကြေးကောက်ခံကာ ဆက်ကြေးယူသည်က တစ်ဖုံ လူတိုင်းသိ အရပ်တိုင်း သိကိစ္စများဖြစ်ပါသဖြင့် ရဲချူပ် ကျော်ကျော်ထွန်း အပါအဝင် ရဲစခန်းမှူးတိုင်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တိုင်းကို ပြင်ထန်စွာ အရေးယူပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
Reply snipher January 25, 2013 - 9:38 pm ရဲနှင့် ပြည်တန်ဆာအတူ မှောင်ရိပ်ခိုလို့ ဖမ်းမိလျှင် အလိုတူအလိုပါ ရဲကိုမဖမ်းဘဲ ပြည်တန်ဆာ ကိုပဲ ဖမ်းတဲ့ ဥပဒေမျိုးပါပဲ။ ပြည်တန်ဆာလုပ်ငန်းတရားဝင်ခွင့်ပြုမှာလား-မခွင့်ပြုမှာလား ဆိုတာကို တင်သွင်းရမှာပါ။ တရားဝင်ခွင့်ပြုလျှင် ဒီဥပဒေမျိုးတွေက ပစ်ပယ်ရတော့မှာပါပဲ။ ကိုလိုနီခေတ်က ဥပဒေတွေကို အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များ မပစ်ပယ်နိုင်သေးတာက ကျွန်စိတ်မကုန်သေးဘူး လို့ ပြောရမှာပါပဲ။
Reply Mon- Kayin January 26, 2013 - 1:36 am ၁၉၄၉ ပြည့်တန်ဆာဥပဒေကိုမပြင်ချင်တဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာထဲကတစ်ခု ကတော့ ပြည့်တန်
ဆာများနှင့် အများဆုံးပျော်ပါးသူများထဲတွင်း ၄င်းတို့အရာရှိတော်တော်များများပါဝင်နေတာ
နောက်တချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့ အောက်ဆိုဒ် ၀င်ငွေတွေထဲမှာ
ပြည်တန်ဆာခေါင်းတွေဆီကနေရတဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်း ၄င်း ရဲများရဲ့မိသားစုဘ၀
တိုးတက်စေရေးအတွက် များစွာအထောက်ကူရရှိစေပါတယ်။ တနည်းအား
ဖြင့်ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုနောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင် နေသောအဖွဲ့စည်းများထဲတွင်တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်မှမြ၀တီမြို့ တွင်
ရဲမှူးအသစ်ပြောင်းတိုင်း ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော ဆိုင်ရှင်များကို အစည်းဝေး
ခေါ်ယူလေ့ရှိကြောင်းကြားသိရပါသည်။ ဆိုင်ရှင်အများစုသည် ရဲအပါဝင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းတော်တော်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြပြီး လစဉ်ကြေးကိုငွေ
ကျပ်သုံးသိန်းအနည်းဆုံးပေးနေကြကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ ဆိုင်ပေါင်းရာနှင့်ချီ ပြီးရှိ နေ
အဓိကပြောချင်တာကတော့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတက်ပြီးနောက်ပိုင်း ကောင်းမွန်သော
မူဝါဒများချမှတ်အကောင်ထည်ဖေါ်နေကြသော်လည်း ဖိဖိစီးစီး မဆောင်ရွက်နိုင်သောကိစ္စ
များတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ပို ၀န်ထမ်းစားဖားများသည် ယနေ့အထိအကြောက်အရွံ့ ကင်းကင်းဖြင့်
လာဘ်စားကာ မကောင်းမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုနေကြကြောင်းကို ပြည်သူအများမှ
Reply Min Myat Kyaw January 26, 2013 - 2:21 am ယောက်ျားတွေကိုအရေးယူရင်အခကြေးငွေပေးပြီး ပျော်ပါးတဲ့ပြည့်တန်ဆာဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့ မလွယ်ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့၊ အရေးယူတာမခံရအောင်သမီးရည်းစားချိန်းတွေ့တာပါ လို့ပြောလိုက်မိလို့ ရဲနဲ့ရပ်ကွက်လူကြီးတွေက ဒါဖြင့်လဲလက်ထပ်လိုက်ကွာလို့ ပြောလို့ ဒုက္ခရောက်သွားဖူးတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ မဆလလက်ထက်က ဂဠုန်စီမံချက်တွေခေတ်ကောင်း တုန်းကပေါ့ဗျာ။ဥပဒေဆိုတာခေတ်နဲ့ညီအောင်ပြင်ဆင်ရတာတော့ဟုတ်တယ်။ ကျားမ ခွဲခြားမှု ကြောင့်ပြင်ရမယ်ဆိုရင်ဥပဒေရဲ့အနှစ်သာရကိုပါပျက်စီးစေတတ်တယ်။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 26, 2013 - 3:42 am ကိုရာဇာရေ တထောင်ပေးရင် ပါးအရိုက်ခံမယ့်သူတွေ တန်းစီ ထွက်လာဦးမယ်နော်။ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ မကောင်း စီးပွားရေး လုပ်ရ၊ ငွေရှာရတာ မလွယ်လို့ အဘိုးအဘွား အရွယ်တွေရော၊ ကလေးတွေပါ လာ တန်းစီ အရိုက်ခံနေဦးမယ်။ ထမင်းတလုတ်အတွက် ….
Reply ဇေယျာ January 26, 2013 - 11:15 am အဲဒီဥပဒေကြီးကိုပြင်သင့်ပါတယ်။ရောဂါတွေများတာဟာနိုင်ငံဆင်းရဲလို့ပါ။
များများကလည်းsex ပါတယ်လေ။မြန်မာတွေတချိန်ကျရင်-ဖာနိုင်ငံဖြစ်စေရမယ်လို့ 
ထိုင်းတွေရဲ့ ကျိန်စာမိနေသလိုပါဘဲ့လား။ထိုင်းလူမျိုးတွေကတော့ ချမ်းသာလွန်းလို့ 
သူတို့ လူမျိုးမှာ -ာမရှိတဲ့။ -ာခံနေတာမြန်မာတွေပါဟုပြောပါတယ်။တချို့ဆိုaids/hiv
ဒါကြောင့် မြန်မာမှာ ရောဂါတွေတိုးပွားနေတာပါ။ထိုင်းဆိုတာမျိုးကလည်း
ကက လို လို နဲ့ ကေတီဗွီတွေမှာပလူပျံ ၊-ာကို -ာမှန်းသိအောင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်
မခွဲထါးလို့ AIDS ရောဂါဟာ တအားတိုးတက်နေတာပါ။
Reply Koko naing January 26, 2013 - 1:20 pm like
Reply Ko Khine January 26, 2013 - 11:12 pm ပြည့်တန်ဆာအေ၇းနှင့်ပတ်သက်လာရင် တိုင်ပြည်ဆင်းရဲ ချမ်သာတာနှင့်မဆိုင်ဘူးလ်ိ့ ထင်တယ် ။ ဥပမာ တခုအနေနှင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်သည့် စင်္ကာပူ၊ မလေး တို့ ကြည့်လိုက်ရင်အသိတာကြီးပါ ။ မြန်မာပြည်ထက် လူနေမှူဘ၀ အဆပေါင်းများစွာသာ တယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ပြည့်တန်ဆာ များ တရားဝင် လိုင်စင် ချပေး တယ် ၊ ဘာမှ နိုင်ငံမျက်နာငယ်စရာ အကြောင်းမှ မရှိဘူး ။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ က ပြညိ့တန်ဆာ အကြောင်းပြော လိုက်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ်လူမျိုး ထိခိုက်တလိုလို ယဉ်ကျေးမှူ ဆော်ကားတလိုလို နဲ့တကယ်တန်း ကျ တော့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် နှင့် လုပ်ပြီး ထိန်းနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဖြစ်နေပြန်တယ် ။
ပြည့်တန်ဆာများ ဖမ်းဆီးဖို့ ဥပဒေ တွေ အားရပါးရ ဆွေးနွေးတာထက် ပြည့်တန်ဆားများအား ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေ များဆွေးနွေးရင် ပိုကောင်းမယ်လား ၊ ပြည်တွင်း ပြည့်တန်ဆာများ လည့်းကိုယ့်လူမျိူး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသူ တွေပါ ။ ဒီနေ့ ဒီအချိန် အထိ ဘယ်နိုင်ငံခြားသူမှ မြန်မာပြည်ထဲလာပြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်တာ မရှိသေးဘူး ၊ ပြည့်တန်ဆာလုပ်သည့်သူတွေဟာ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသူစစ်စစ်တွေပါ ။
ဒီလိုနဲ့ ဘဲ သုတို့ ဘ၀ တွေဟာ ခိုကိုးရာမဲ့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် နဲ့ ပဲ ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေမည်ဆိုရင် ရောဂါကူး ဆက်မှူများ တရားဝင် လွတ်ထားတလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ၊ ကျမ်းမာရေးစီစစ်ပေးပြီး အကာအကွယ်များသုံးကာ တရားဝင် လိုင်စင်ပေးသင့်သည့်အကြောင်း အကြံပြု တင်ပြလိုပါသည် ။
Reply myochit January 29, 2013 - 12:53 am မလွဲသာလို ပြောပါရစေ Ko Khine ပြောသလိုလုပ်ဖို့မလွယ်ကူနိုင်ပါ ပထမဦးဆုံး လုပ်ရ
မှာက နေရာတိုင်းမှာတရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိဖို့ပါ။ ပြည့်တန်ဆာလောကသည် Ko Khine ပြော
သလောက်မရိုးစင်းပါ ဆေးသုံးစွဲဖြန့်ချီတယ် ပစ္စည်းနှင့်ငွေခိုးတယ် လိုအပ်ရင်လူပါသတ်
တယ်။ တနည်းပြောရရင် ဒုစရိုက်လောကပါပဲ အဲသည်ဒုစရိုက်ကောင်တွေကို လိုင်စင်ချပေး
လိုက်ပါက မြန်မာ့ယဉ်းကျေးမှုကိုပျက်စီးစေရုံသာမက မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကို အားပေးရာ
ရောက်စေပါတယ်။ အခုတောင်မှ ဒီမိုကရေစီကိုတလွဲ ထင်ပြီး နေရာတိုင်းမှာ ပြည့်တန်ဆာ
လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့လာလိုက်ကြတာ တရားဥပဒေမရှိတော့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ဘာပဲပြောပြော အခုခေတ်စားနေတဲ့ ရဲနှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေကို ပိုက်ဆံပေး
ပြီးနားလည်မှုနဲ့လုပ်စားနေတာတောင်မှပိုလွတ်လပ်သေးတယ်။ ဒီလိုလွတ်လပ်စွာ လုပ်
စားနေကြရတာတောင်လိုင်စင်တောင်းချင်သေးတယ်။ ပိုက်ဆံပေးရင် အကုန်ရတဲ့စနစ်
ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ပေါက်ပွားလာတာ သမ္မတ လည်း
Reply Hla Cho January 27, 2013 - 12:01 am “Culturally imposable in Myanmar” It should be discussed, debated and decided between Social leaders, Sanghas, Women associations and NGOs.It is not It isalame excuses.Every reason in Hluttaw should haveagood the police to make decisions.references.Conclusions should be “evidence base”. Prostitution is rampant, aggravated by by extreme poverty and helplessness of women families.Open door policy will bring some unavoidable problem, prostitution is one. The protection of Myanmar male gender for females has been deteriorate during these dark decades.Don’t hide this social disorders under longyies and culture. To cureadisease one need to reach the right diagnosis and aware potential complications.
Reply မင်းမင်း January 27, 2013 - 2:27 pm မြန်မာနိုင်ငံက တာဝန်ရှိတဲ့ ရဲတွေကို ပြုပြင်ြေ့ပာပြောင်းလဲမှု မလုပ်ရင်တော့ ဘာမှထိရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရာဇ၀တ်မှုတွေဟာ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနှင့်လည်း သွားရောက်ပတ်သက်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူငယ် များကိုလည်း ရာဇ၀တ်နှိင်နှင်းရေးတွေမှာ တာဝန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အုပ်ချုပ်ရေးတို့၊ ရဲတို့ဘာတို့ ညာတို့ အကုန်ဟာလည်း ဗမာတွေချည်းဘဲဆိုတွေ့ တိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ ဘာလုပ်ကြတော့မှာလည်း။ တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေထဲမှာလည်း စစ်သားလုပ်ချင်တဲ့ သူ၊ အရာရှိလုပ်ချင်တဲ့သူ၊ ပါဝါသုံးချင်တဲ့သူ ရှိကြမှာဘဲ။ ဒါပေမေ့ အားလုံးမှာ ဗမာ(လူမျိုးကြီး)တွေ ချုပ်ကိုင်ထား တယ်လို့ လူမျိုးငယ်တွေ ခံစားနေရတယ်၊ အမှန်လည်းအဲလိုဖြစ်နေပါတယ်။
Reply Laykyal January 31, 2013 - 4:33 pm Don’t worry man.Much easier to become general ,officer and powerful man in border.Worry about your self.Don’t wast your time for thinking nonsense.Help your self and findagood job.
Reply စည်သူ January 31, 2013 - 9:50 pm သတင်းတွေကောင်လိုပါ
Reply soeoo March 10, 2013 - 7:48 pm မြန်မာစစ်အစိုးရဲ့ ရေးဆွဲပြဌါန်းထားခဲ့တဲ့ဥပဒေကိုပြင်ကိုပြင်ရမယ် ဥပဒေပြုတယ်ဆိုတာပြည်သူကိုအခြေခံပြီးရေးဆွဲပြဌါန်းပေးရမယ် ပြည်သူတွေကိုဥပဒေတွေကလုံးခြုံးမူရှိအောင်ကာကွယ်ပေးရမယ် ဒါမှပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ကလုံခြုံမူရှိမယ် မလိုလားအပ်တဲ့ဥပဒေပုဒ်မပုပ်ရပ်တွေကိုပြင်ကိုပြင်ရမယ် ဥပဒေမပြင်ရင် 2015ရွှေးကောက်ပွဲဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျွှန်ချှစ်တဲ့အမေစုသမတဖြစ်မလည်း ဒါကြောင်ရွှေးကောက်အတွက်လုထုအင်းအားနဲ့ ပြင်မယ်
Reply soeoo March 10, 2013 - 8:04 pm မဟုတ်သေးဘူး ပြည်တန့် ဆာဆိုတာနိူင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ် တရားဝင်လုပ်ခွင့် လိုင်စင်ထတ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါ မ ဟုတ်ရင် လိုင်းကျှေးယူပြီးလူပ်စားနေကြတာပဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာအမိူးမိူးခေါင်းပုံဖြတ်ခံထိတာပဲ့ ပြည်တန်ဆာခေါင်းဆွေကမရားဖြတ်ကြတယ် ရန်ကုန်မြို့ မှာအမျှာကြီးပါ တရားဝင်လိုင်စင်ချှပေးလိုက်တော့ ရောဂါမရှိ၇ှိဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးလိုရသွားတယ် နိူင်ငံအတွက်လည်းအခွန်ဝင်ငွေ၇တယ် မြန်မာယဉ်ကျှေးမူဆိုတဲ့ စကားကြီးတွေကြောင့် ခက်နေတယ် ဘာလုပ်လုပ် မြန်မာယဉ်ကျှေးမူနဲ့့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်မင်းတုန်းမင်းခေတ်ကိုပြန်သွားရမလားမသိဘူး
ဒီရေတော စိုက်ပျိုးရန် ဟောပြောမှုဖြင့် ဒေးဒရဲ ဒေသခံ ၃ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ကို မဲဆောက်သို့ ပြန်ပို့
နိုင်ငံခြားသားများ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် စိစစ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့မည်
ဧရာဝတီတိုင်း ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ စီမံကိန်း ဒေသခံများ ကန့်ကွက်
ခေါင်းလောင်းရှိ မရှိ မသိဟု ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့က ပြောဆို
ဗိုက်ဗာတွင် မိုဘိုင်းလ် ဗီဒီယို ခေါ်ဆိုမှုစနစ် သုံးနိုင်ပြီ
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတူးဖော်မှု နတ်စင်တရာ ဆရာတော် ရှင်းလင်းမည်